Ithegi: b2b | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 24, 2022 NgoLwesibini, Meyi 24, 2022 Kirk Enright
Umthengi persona yintlanganisela ekunika umfanekiso ocacileyo wabaphulaphuli ojoliswe kubo ngokudibanisa ulwazi lwedemographic kunye nengqondo kunye nokuqonda kwaye emva koko uyiveze ngendlela ekulula ukuyiqonda. Ngokwembono esebenzayo, abantu bomthengi bakunceda ukuba usete izinto eziphambili, unike izixhobo, uveze izithuba kwaye uqaqambise amathuba amatsha, kodwa okubaluleke ngakumbi kunokuba yindlela abafumana ngayo wonke umntu ekuthengisweni, ekuthengiseni, kumxholo, kuyilo, nakuphuhliso kwiphepha elinye,
NgoLwesithathu, Aprili 27, 2022 NgoLwesithathu, Aprili 27, 2022 Douglas Karr
Kukho amaxesha apho ufuna ngokwenene ukufumana idilesi ye-imeyile ukuze uqhagamshelane nomntu osebenza naye ongenayo kwincwadi yakho yeedilesi. Ndihlala ndimangaliswa, umzekelo, bangaphi abantu abane-akhawunti ye-LinkedIn ebhaliswe kwidilesi ye-imeyile yobuqu. Siqhagamshelene, ndiye ndibajonge, ndibathumelele i-imeyile… kwaye ungaze ndifumane mpendulo. Ndiza kuhamba kuyo yonke imiyalezo ethe ngqo yojongano kuzo zonke iisayithi zemidiya yoluntu kunye nempendulo
Uyisebenzisa njani iTikTok kwiNtengiso yeB2B
NgoLwesithathu, Aprili 6, 2022 NgoLwesithathu, Aprili 6, 2022 Kyle Dulay
I-TikTok lelona qonga leendaba zentlalo likhula ngokukhawuleza kwihlabathi, kwaye linamandla okufikelela ngaphezulu kwe-50% yabantu abadala baseMelika. Zininzi iinkampani ze-B2C ezenza umsebenzi olungileyo wokusebenzisa iTikTok ukwakha uluntu lwazo kwaye ziqhube ukuthengisa ngakumbi, thatha iphepha leTikTok likaDuolingo umzekelo, kodwa kutheni singaboni ngakumbi ishishini ukuya kwishishini (B2B) TikTok? Njengophawu lweB2B, kunokuba lula ukuthethelela
NgoLwesihlanu, Matshi 18, 2022 NgoLwesihlanu, Matshi 18, 2022 Douglas Karr
Umthengisi woMxholo we-Elite uphuhlise inqaku elibanzi ngokumangalisayo malunga neeNkcazo zeNtengiso zoMxholo ekufuneka ishishini ngalinye letyise. Akukho mthengi ukuba singabandakanyi ukuthengiswa komxholo njengenxalenye yesicwangciso sabo sokuthengisa. Inyani kukuba abathengi, ngakumbi abathengi beshishini-kuya-kwishishini (B2B), baphanda iingxaki, izisombululo, kunye nababoneleli bezisombululo. Ithala leencwadi lomxholo oliphuhlisayo kufuneka lisetyenziswe ukunika zonke iinkcukacha eziyimfuneko ukubanika impendulo ngokunjalo